Shanduko yeDhijitari uye Kukosha kwekubatanidza Strategic Vision | Martech Zone
Imwe yesirin'i dzesirivha dzematambudziko eCOVID-19 kumakambani kwave kuri kumhanyisa kuri kuita shanduko yedigital, yakasangana mu2020 ne65% yemakambani zvinoenderana Gartner. Zvave zvichikurumidza-kumberi sezvo mabhizimusi pasirese akachinjisa maitiro avo.
Sezvo denda iri rakaita kuti vanhu vazhinji vadzivise kusangana-ne-kumeso kusangana muzvitoro nemahofisi, masangano emarudzi ese anga achipindura vatengi nemakasitoma ari nyore. Semuenzaniso, vatengesi uye makambani eB2B asina kumbobvira aine nzira yekutengesa zvigadzirwa zvakanangana anga achishanda nguva yakawandisa kuburitsa hunyanzvi hwe e-commerce, nepo panguva imwe chete vachitsigira anonyanya kushanda-kubva-kumba kwevashandi. Nekuda kweizvozvo, kudyara mari muhunyanzvi hwetekinoroji kwakawedzera kufambirana nezvinotarisirwa nevatengi.
Asi uchimhanyisa kuisa mari muhunyanzvi nekuda kwekuti ndizvo chinhu chekuita kashoma zano rakanaka rekuita. Makambani mazhinji anotenga mune tekinoroji inodhura, achifunga kuti inogona kugadzirirwa nyore nyore gare gare kuti ikwane mamodheru emabhizimusi, vateereri, uye zvinangwa zvevatengi, kungoodzwa mwoyo mumugwagwa.
Panofanira kuva nehurongwa. Asi mune ino isina chokwadi bhizinesi nharaunda, panofanirwa kuve nekukurumidzira. Sangano rinogona sei kuita zvese izvi?
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvakanyanya, sebhizimusi rinoenda zvakazara padhijitari, iko kusanganisa kweakasimba masisitimu ekuona pane iyo IT uye kushambadzira neziso kune hukuru hwekukura kwedhijitari. Pasina iyo sangano rinokanganisa mhedzisiro yakadzikira, hunyanzvi hwakawanda hwesainzi, uye zvinangwa zvebhizinesi zvakarasika. Asi pane fungidziro yekuti kuita zvine hungwaru kunoreva kudzikisira maitiro. Hazvisizvo. Kunyangwe kana iyo bhizinesi iri mukati mekuburitswa kwayo, haina kunonoka kuita zvigadziriso kuzadzisa zvakakosha zvibodzwa.
Nzira yakanakisa yekubatanidza chiratidzo chehunyanzvi mukushandurwa kwedhijitari ndeyeyedzo-uye-dzidza pfungwa. Kazhinji chiono chinotanga kubva kuhutungamiriri uye chichienderera nepfungwa dzakawanda dzinogona kusimbiswa kuburikidza nekumisikidza. Tanga zvishoma, bvunzo nemasetseti, dzidza kuwedzera, kuvaka simba, uye pakupedzisira uwane zvinangwa zvebhizinesi rakakura uye zvemari. Panogona kunge paine zvimhingamupinyi zvenguva pfupi munzira - asi nenzira yekuyedza-uye-kudzidza, kukundikana kunofungidzirwa kunova kudzidza uye sangano rinogara richiona kufambira mberi.
Heano matipi mashoma ekuti ubudirire, nenguva inoshanduka yedhijitari ine yakasimba Strategic hwaro.
Gadza tarisiro yakajeka nehutungamiriri. Sezvo nezvakawanda zvinhu, rutsigiro kubva kumusoro rwakakosha. Batsira vatungamiriri vakuru kunzwisisa kuti kumhanya pasina zano hakuna zvakunobatsira. Maitiro ekuyedza-uye-kudzidza anounza sangano kune rairo rekupedzisira raunoda munguva pfupi pfupi uye roramba richisimbisa maonero aro ese.
Chengetedza matekinoroji ekutsigira akakodzera. Chikamu chebudiriro yedhijitari shanduko kuve neakanaka kuunganidzwa kwedata uye manejimendi maitiro, maturusi ekugonesa kuyedza uye kuita kwako pachako, uye analytics uye bhizinesi njere. Iyo martech stack inofanirwa kuongororwa zvizere kuti ive nechokwadi chekuti masisitimu akabatana uye anoshanda pamwechete mushe. Dhata rehutsanana nyaya uye zvinorema zvinyorwa zvemanyorerwo zvipingamupinyi zvakajairika zvinopinda munzira yekushandurwa kwedhijitari. Masisitimu anofanirwa kuve anotyisa uye anoshanduka kushanda nehunyanzvi hwekuwedzera tekinoroji sezvo bhizinesi rinochinja. Kuti zvibudirire izvi, R2i vanobatana neAdobe semhinduro dzavo dzekugadzirisa dzakagadzirirwa kubatsirana uye neumwe wepamusoro-mukirasi matekinoroji mukati meiyo martech ecosystem, ichibatanidza data kubva kune akawanda masosi kune epakati mapuratifomu.
Usakunda maitiro acho. Sangana nekufamba kwenguva. Masangano mazhinji ari kusimuka matekinoroji avo edhijitari kekutanga, zvinoreva kuti pane zvakawanda zvekudzidza panguva imwe chete. Zvakangwara kurwisa mari muzvidimbu zvidiki nechikamu, kugona masisitimu sezvaunoenda. Zvakare, masangano mazhinji ari pasi pekumanikidzwa kwakanyanya kwemari, zvinoreva kuita zvakawanda nevanhu vashoma. Mune ino nharaunda, kudyara kwekutanga kunozotarisa pane otomatiki kuitira kuti vashandi varipo vawane kutarisisa pamabasa ekuwedzera-kuwedzerwa. Nekutanga tekinoroji mugwagwa, iro bhizinesi rinonyanya kushanda mukuzadzisa zvinangwa zvaro zvakakura.
Zvipira kupa chirevo pamwedzi kana mukota. Kuti chirongwa ichi chishande, panofanirwa kuve nekujeka pamusoro pezviri kudzidzwa uye kuti zviri kukanganisa sei hurongwa hwese. Seta chinangwa chekusangana nehutungamiriri hwekambani uye nhengo dzechikwata dzakakosha pamwedzi kana makota, kupa zvigadziriso, kudzidza, uye kurudziro yekugadzirisa hurongwa. Kuti uve nechokwadi chekuita zvinobudirira, zvinogona kuve zvakangwara kuchengetedza shamwari yedhijitari. Kana COVID-19 yakaratidza chero chinhu, ndezvekuti nzira dzinorema hadzichakwanisika nekuti panouya zviitiko zvisingatarisirwi, masangano anofanirwa kukwanisa kutonga nekukurumidza izvo zvinofanirwa kumbomira uye chii chinofanira kuchinja. Vabatsiri vane hunyanzvi mune zvese tekinoroji uye zano vane nzwisiso yakadzama yekuti vaviri vacho vanobatana sei. Ivo vanogona kubatsira kugadzira zvirongwa zvakasiyana siyana izvo zvicharamba zvichishanda uye zvinobatsira mwedzi mitatu, mwedzi mitanhatu, gore, kunyangwe makore matatu kubva zvino.
Pamusoro pegore rapfuura nyika yakachinja - uye kwete chete nekuda kwecoronavirus. Zvinotarisirwa zvechiitiko chedhijitari zvachinja, uye vatengi vanotarisira mwero wakaenzana wekureruka nerutsigiro, vangave vari kutenga masokisi kana marori esimende. Kunyangwe iri bhizinesi chikamu, makambani anoda zvinopfuura webhusaiti; ivo vanofanirwa kuziva nzira yekuunganidza data remusika, maitiro ekubatanidza iyo data, uye mashandisiro ekushandisa izvo zvinongedzo kuendesa zvakasarudzika mutengi zviitiko.
Mukutsvaga uku, kumhanya uye zano hazvisi zvinangwa zvakasarudzika. Iwo makambani anozvitora zvakanaka ndeavo vasingangoteedzere bvunzo-uye-kudzidza pfungwa asiwo vanovimba vavanoshanda navo vekunze nekunze bhizinesi. Mapoka anofanirwa kuremekedza hutungamiriri hwavo, uye vatungamiriri vanofanirwa kupa rutsigiro rwakakodzera. Gore rapfuura rave rakaoma kutaura zvishoma - asi kana masangano akabatana, vanozobuda kubva parwendo rwavo rwekushandura kwedigital vakasimba, vakangwara, uye vakabatana zvakanyanya kune vatengi vavo kupfuura nakare kose.
Tags: kupiswakushandisa michinaCOVID-19hutsanana hwe datashanduko yedhijitarikusanganautungamirimartech stackkubikachiratidzo chehunyanzvinziraTechnologyedza uye dzidza
Kudhinda: On-Kudiwa Dhinda uye Embroidery Kuzadzikiswa